४० लुटेरा संग एक्लै लड्ने भारतीय आर्मीका वीर नेपाली बिष्णु श्रेष्ठबारे हिमेश रेशमियाले फिल्म बनाउने !
भारतीय आर्मीको वीर नेपाली जवान बिष्णु श्रेष्ठको जीवन माथी बलिउडमा फिल्म बन्ने भएको छ । बलिउडका चर्चित गायक तथा अभिनेता हिमेश रेशमियाले उनको बायोपिकको अधिकार लिएका छ्न । भारतिय मिडियामा यो खबर भाइरल भैसकेको छ।
यस बारेमा भारतिय मिडियाले यस्तो लेखेका छन !
को हुन बिष्णु श्रेष्ठ ?
सन् २०१० को सेप्टेम्बर दुई तारिखमा ३५ वर्षे गोर्खा सैनिक गोरखपुरबाट राँची जाँदै थिए । उनी मौर्य एक्सप्रेसमा यात्रा गरिरहेका थिए । डाकाहरुले रेल बाटोमा नै कब्जा गरेर यात्रुहरुसँग भएको पैसा, गरगहना, मोबाइललगायतका सामग्री लुट्न थाले । जब डाका श्रेष्ठ भएठाउँ पुगे, उनी सुतिरहेका थिए । डाकाहरुले झक्झकाएर उठाउँदा उनी आफूसँग भएको सामग्री दिन तयार भए तर उनीसँगै बसेकी १८ वर्षे युवतीलाई डाकाहरुले बलात्कार गर्न खोजे तब उनी चुप बस्न सकेनन् । उनले आफूसँग भएको खुकुरी निकाले र डाकामाथि जाइलाग्न थाले ।
श्रेष्ठले टाइम्स अफ इन्डियालाई भने, ‘म एक सैनिक हुँ र देशको जनताको सुरक्षाका लागि मैले तलब खाने गर्छु । मैले डाकाहरुको मनोमानी चुप लागेर हेर्न सकिनँ । मैले आफूसँग भएको खुकुरी निकालेँ र डाकाहरुलाई आक्रमण गर्न थालेँ । मैले तीनजनालाई छप्काएँ । आठ जना उठ्नै नसक्ने गरी मुर्छित भए । त्यसपछि अन्य डाका भागे ।’ डाकासँगको झडपमा विष्णुको बायाँ हातमा चोट लाग्यो । दुई महिनाको उपचारपछि उक्त घाउ निको भयो । पुलिसले डाकाहरुलाई समात्न सफल भयो । उनीहरुबाट चार लाख नगद, सुनका गहना, मोबाइल फोन, ल्यापटप र अन्य सामग्री बरामद गरियो ।